4153 - Много видео » Страница 5
၂၄ နာရီအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော အနုပညာရှင်များရဲ့ အကြောင်း (၂၇၀)
၂၄ နာရီအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော အနုပညာရှင်များရဲ့ အကြောင်း (၂၇၀)--------- Cele 24 ---------(၁) တရားစီရင်ရေးကို ဖဲ့လိုက်တဲ့ သမ္မတကြီးထံပေးစာမှာ အဘအဖြစ် သရုပ်ဆောင်သူ(၂) ဒေါ်လာတွေပျံ့ ကျဲပြီး မှောက်လျှက်လဲနေတဲ့အကြောင်း နေခြည်ဦး တုံ့ ပြန်(၃) ဂျပန်မှာ သီချင်းသွားဆိုခွင့်ရဖို့ (၉)နှစ်စောင့်ခဲ့ရတာ ပြည့်သွားတဲ့ စိုင်းစိုင်း(၄) မင်းသွေးနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကား ရုံတင်ချိန်အတွက် စည်ဖြိုး စိတ်မကောင်းဖြစ်Cele 24 အစီအစဉ်ကိုညစဉ်(၇) နာရီတိုင်း ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါသည်။
မျက်ကြည်လွှာတစ်ခုတည်းနဲ့ လူနာ ၃ယောက်ကို ခွဲကုနိုင်တဲ့အကြောင်း
မျက်ကြည်လွှာတစ်ခုတည်းနဲ့ လူနာ ၃ယောက်ကို ခွဲကုနိုင်တဲ့အကြောင်း------ Health Talk ------မျက်ကြည်လွှာတစ်ခုတည်းနဲ့ လူနာ ၃ ယောက်လောက်ကို အောင်မြင်စွာ ခွဲဝေကုသနိုင်လို့ ရန်ကုန်မျက်စိအထူးကုဆေးရုံကြီးကို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကတောင် အံ့အားသင့်ပြီး လာရောက်လေ့လာကြပါတယ်။ ဌာနတွေရဲ့ စီမံလုပ်ဆောင်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါမောက္ခဌာနမှူး ဒေါက်တာတင်ဝင်းက ခုလိုဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်။ရိုက်ကူး - မင်းသီဟန်၊ တည်းဖြတ် - ကိုမိုး
ကရင်ပြည်နယ်နေ့ ပွဲတော်အတွက် တစ်ရက်သုံးကြိမ် မိုင်းရှင်းလင်းရေး လုပ်
ကရင်ပြည်နယ်နေ့ ပွဲတော်အတွက် တစ်ရက်သုံးကြိမ် မိုင်းရှင်းလင်းရေး လုပ်---------- အကုန်သိသတင်းဌာန ----------(၆၃) နှစ်မြောက် ကရင်ပြည်နယ်နေ့ ပွဲတော်အတွက် ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်ရပ်တွေ မရှိစေဖို့ နဲ့ လူထုလုံခြုံရေးအတွက် တစ်ရက်ကို သုံးကြိမ်ထက်မနည်း မိုင်းရှင်းလင်းရေးတွေ လုပ်မယ်လို့ ကရင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲ့ ရဲမှူးကြီး အောင်မြတ်မိုးက ပြောပါတယ်။ တည်းဖြတ်တင်ဆက် - သီဟ ၊ ရိုက်ကူး - စောဘောသိုလ်
ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းကောင်းများ တင်ဆက်မှု - ည(၈)နာရီရုပ်သံ---— အကုန်သိသတင်းဌာန —---(၁) တပ်မတော်ကိုပဲ တစ်ဖက်ထဲ အပစ်ရပ်ခိုင်းလို့မရဘဲ နှစ်ဖက်စလုံးပြိုင်တူ အပစ်ရပ်ဖို့လိုတယ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ပြော(၂) နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျနေခြင်းကို ပညာရေးနှင့် တိုက်ဖျက်ရမယ်လို့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ပြော(၃) NLD အစိုးရလက်ထက်တွင် ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနည်းပါးနေခြင်းမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုလိုအပ်ချက် နဲ့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လွန်ကဲနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အကြံပြု (၄) “အကြမ်းဖက်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်” ၊ “ ဂျူးဆန့်ကျင်ရေး အာဏာရှင်” လို့ခေါ်တဲ့ အသုံးအနှုံးများဖြင့် နေတန်ယာဟုနဲ့ အာဒိုဂန် အပြန်အလှန် ပုတ်ခတ်ပြော(၅) အမေရိကန်ကျောင်းသားသေဆုံးခဲ့မှုကို မြောက်ကိုရီးယားက ဒေါ်လာ ၅၀၁ သန်း လျော်ကြေးပေးရန် အမေရိကန်တရားရုံးအမိန့်ချ
ပတ္တ္တမြားရတုချိန်ခါဝိဇာတမွေးနေ့မင်္ဂလာပွောငျး ( 240 X 320 ).mp4
လာမယ့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို တရားမျှတလိမ့်မည်မထင်ကြောင်း ဦးနေမျိုးအောင်ပြော
------ အကုန်သိသတင်းဌာန -----ယခု လာမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို တရားမျှတလိမ့်မယ်လို့ မထင်ဘူးလို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးနေမျိုးအောင်က ပြောပါတယ်။ နောက်ကွယ်ကနေပြီးတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေက အခုအချိန်ကတည်းက နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေကြောင်း၊ ၀န်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေနဲ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးနေကြောင်း ဦးနေမျိုးအောင်က အခုလို ပြောကြားထားပါတယ်။ ရိုက်ကူး - မင်းသီဟန် တည်းဖြတ် - ပြည့်စုံ
၂၄ နာရီအတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့သော မှုခင်းများ(၂၂၁)
၂၄ နာရီအတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့သော မှုခင်းများ(၂၂၁)-------- Crimes 24 ---------(၁) အသုဘအိမ်က ဖဲဝိုင်းရန်ပွဲမှာ ညီဖြစ်သူကို လူမှားပြီး ဓါးနဲ့ ထိုးသတ်မိ(၂) လုပ်အားခမပေးလို့ အလုပ်ရှင်ကို အလုပ်သမားက ဓါးနဲ့ ခုတ်သတ်(၃) အမဲလိုက်သမားတစ်ဦး တူးမီးသေနတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပစ်မိပြီး သေဆုံး(၄) ကြက်သမားချင်း ရန်ဖြစ်စကားများပြီး ဓါးနဲ့ ထိုးသတ်မှု ဖြစ်ပွားCrimes 24 အစီအစဉ်ကို ညစဉ်(၉)နာရီတိုင်း ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါသည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းကောင်းများ စုစည်းမှု - ည(၈)နာရီ ရုပ်သံသတင်း
ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းကောင်းများ စုစည်းမှု - ည(၈)နာရီ ရုပ်သံသတင်း---— အကုန်သိသတင်းဌာန —---(၁) MNL အနေဖြင့် စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာကို MFF စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီသို့ အကြံပြုရုံပဲ ရနိုင်ဟုဆို(၂) နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာတွင် ရခိုင်ပြဿနာကို မြန်မာဘက်မှ မားမတ်စွာ ဆက်လက်ရပ်တည်မည်ဟု တရုတ်သံအမတ်ပြော(၃) ယီမင်နဲ့ အခြားနေရာတွေမှာ ၄င်းတို့ လုပ်&#
ရန်ပွဲကို လာရောက်ဖြေရှင်းတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး သေနတ်ထိမှန်
ရန်ပွဲကို လာရောက်ဖြေရှင်းတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး သေနတ်ထိမှန်------ အကုန်သိသတင်းဌာန ------မီးထွန်းပွဲမှာ အရပ်သားတွေ ဟိုဘက်ဒီဘက် အုပ်စုဖွဲ့ပြီးရန်ဖြစ်နေတာကို ရဲတပ်ဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တို့က သွားရောက်ဖြေရှင်းပေးရာ အရပ်သားတစ်ဦးက ဒုရဲအုပ်တစ်ယောက်ရဲ့ခါးမှာ ချိတ်ထားတဲ့သေနတ်ကို ၀င်လုရင်း ရန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြင့် ကျည်ထွက်သွားကာ ဒုရဲအုပ်တစ်ယောက် သေနတ်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်။တင်ဆက် - သိမ့်အေးချမ်း၊ တည်းဖြတ် - သူရိန်၊ သတင်း - နိုင်မင်းလွင်
(၇၉)နှစ်မြောက် ဦးဥတ္တမနေ့အခမ်းအနား ကျင်းပ
--------— အကုန်သိသတင်းဌာန —---------ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ပျံလွန်တော်မူခြင်း (၇၉) နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် (၇၉)နှစ်မြောက် ဦးဥတ္တမနေ့အခမ်းအနားကို ဒီကနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက ရွှေတိဂုံဘုရားတောင်ဘက်မုဒ်ရှိ ဦးဥတ္တမ ပန်းခြံတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။အဆိုပါအခမ်းအနားကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးမှူးကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ သောင်းနဲ့ချီလာရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ရိုက်ကူး/တည်းဖြတ် - အောင်သူရိန်၊ ရဲထက်
ရန်ကုန်တိုင်းတစ်ခွင် ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်နယ်မြေ ထူထောင်မည်
------------ အကုန်သိသတင်းဌာန -------------" သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတွေမှာ ဆေးလိပ်မသောက်ရေး အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကနဦးအကောင်အထည်ဖော်မယ့်မြို့နယ်တစ်ခုအနေနဲ့ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ကိုရွေးပြီး ဒီကနေ့စပြီးအကောင်အထည်ဖော်တာပါ ...... "ရိုက်ကူး/တည်းဖြတ် - မင်းသီဟန်၊ပြည့်စုံ#ရန်ကုန်တိုင်း #ဆေးလိပ်ကင်းစင် #အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက် #ကျောက်တံတားမြို့နယ်
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် သတိပေးသ.mp4
အောင်ရဲထွေးအမှုမှာ ရဲအုပ်ချစ်ကိုကို တကယ်လာဘ်စားခဲ့သလား
အောင်ရဲထွေးအမှုမှာ ရဲအုပ်ချစ်ကိုကို တကယ်လာဘ်စားခဲ့သလား--------- အကုန်သိသတင်းဌာန ---------ဟာသသရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထွေး သေဆုံးမှာ ရဲအုပ်ချစ်ကိုကိုက ပြစ်မှုကျုးလွန်သူတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သားကြီးခေါ် သန်းထွဋ်အောင်ရဲ့ ဖခင်ဆီကနေ လာဘ်ယူခဲ့တယ်လို့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း ရဲအုပ်ချစ်ကိုကိုဟာ လာဘ်စားမှုအတွက် တရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ရိုက်ကူး - ဒါးဇ ၊ တည်းဖြတ်တင်ဆက် - သီဟ
ပြည်တွင်း ပြည်ပသတင်းကောင်းများ စုစည်းတင်ဆက်မှု - ည(၈)နာရီရုပ်သံ-------— အကုန်သိသတင်းဌာန —-------(၁) ရဲတပ်သားတစ်ဦး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပစ်သတ်မှုဖြစ်(၂) အုပ်ချုပ်သူနှင့် မီဒီယာ ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းသွားသင့်ကြောင့် NLD ဒေါက်တာမျိုးညွန့် ပြော(၃) ဘင်္ဂါလီ ၆၀၀၀ ကို ပထမအသုတ်အဖြစ် မြန်မာကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြန်ပို့ မည်(၄) အရွယ်မရောက်သေ
အကယ်ဒမီအတွက် ဇာတ်ကားတွေ ရှေ့ လမှာ စတင်စိစစ်တော့မယ်
အကယ်ဒမီအတွက် ဇာတ်ကားတွေ ရှေ့ လမှာ စတင်စိစစ်တော့မယ်-------- အကုန်သိ အနုပညာ --------ပိုမိုလွတ်လပ်မျှတတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်စေဖို့ အတွက် ပုံမှန် ဒီဇင်ဘာလမှာ စစ်ဆေးတာကို တစ်လကြိုစောပြီး နိုဝင်ဘာထဲမှာ စိစစ်တော့မယ်လို့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇင်ဝိုင်းက ပြောပါတယ်။ ဒီနှစ်အကယ်ဒမီအတွက် ပြင်ဆင်ထားမှုများကိုလည်း ဦးဇင်ဝိုင်းက ရှင်းပြပါတယ်။ ရိုက်ကူးမေးမြန်း - နွယ်ဏီနှင့်အဖွဲ့၊ တည်းဖြတ် - ပြည့်စုံ
ပရဟိတ မင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေ ဖွင့်ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေး
ပရဟိတ မင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေ ဖွင့်ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေး--------- စားလိုက်ကြစို့ ----------ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပျော်မွေ့ နေတဲ့ မင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေက သူ့ ရဲ့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာ လိုအပ်တဲ့အလှူအတန်းတွေ လုပ်နိုင်ဖို့ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး စားသောက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် ဖွင့်ထားပါတယ်။ သူဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်လေးကမှာ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေ ရနိုင်သလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်လောက် စားကောင်းသလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ရိုက်ကူးတည်းဖြတ်တင်ဆက် - ပြည့်စုံ ၊ ကြယ်စင်
ရုပ်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းကနေ အတုယူ၊အတုခိုးချင်ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်
" ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာကျတော့ နားလည်မှုတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ စနစ်မကျဘူး။ စည်းကမ်းမကျဘူး။ သူတို့တွေက အရာရာ အားလုံး စည်းကမ်းကျတယ်။ စနစ်ကျတယ်။ အဲဒါကို အတုယူချင်တာ။ သူတိုနဲ့ ပူးပေါင်းရင် သူတို့ဆီက ကောင်းတဲ့အချက်တွေကို အတုခိုးချင်တာပေါ့ ........... "ရိုက်ကူး/တည်းဖြတ် - နွယ်ဏီ၊ကြယ်စင်၊ပြည့်စုံ
ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းကောင်းများ စုစည်းတင်ဆက်မှု - ည(၈)နာရီရုပ်သံ
ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းကောင်းများ စုစည်းတင်ဆက်မှု - ည(၈)နာရီရုပ်သံ-------- အကုန်သိသတင်းဌာန --------(၁) တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် တပ်မတော်ထောက်ခံပွဲကို ဒေသခံများကန့်ကွက်(၂) NCA ကိုမယုံ၍ တရားဝင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ မပါဝင်ခြင်းမဟုတ်ဟု KNU မှ ပဒိုတာဒိုမှူး ပြော(၃) အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအထိ ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးနိုင်မည့် ရန်ကုန်မြို့ ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း ဖွင့်လှစ်(၄) ဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ ရေးအစီအစဉ်အတွက် လွှဲပြောင်းရေးစခန်းတွေ အသင့်ဖြစ်ပြီဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြော (၅) ကယ်လီဖိုးနီးယားတောမီး သေဆုံးသူ ၂၅ ဦးအထိရှိလာ
သုဝဏ္ဏ မိုးလုံလေလုံအားကစားရုံ(၁)ကို အကုန်လုံးဖြိုချပြီး အသစ်ပြန်ဆောက်မည်
သုဝဏ္ဏ မိုးလုံလေလုံအားကစားရုံ(၁)ကို အကုန်လုံးဖြိုချပြီး အသစ်ပြန်ဆောက်မည်--------- အကုန်သိသတင်းဌာန ---------သုဝဏ္ဏ မိုးလုံလေလုံအားကစားရုံကြီးကို တရုတ်နိုင်ငံက တစ်ခုလုံးဖြိုချပြီး အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးတော့မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ အတွင်းဝန်နှင့်အဖွဲ့ က တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ လိုအပ်သော စာချုပ်ချုပ်ဆို တိုင်ပင်မှုများ လုပ်ဆောင်တော့မည်ဟု ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြလေးစိန်က ပြောသည်။ ရိုက်ကူးတည်းဖြတ် - သားကို
သောကြာသားသမီးများအတွက် ဆရာမရွှန်းမြအောင်၏ ဟောကြားချက်
------------ ဗေဒင် ------------- "သောကြာသားသမီးတွေ ကံကောင်းစေတဲ့အရောင်က အညိုရောင်ပါ။ နံပါတ်က ၂၊၅၊၉ ပါ။ ကြံစည်သမျှတွေ အောင်မြင်မယ်။ အနှောင့်အယှက်အတားအဆီးတွေလည်း များနေတတ်တယ်။ သူတစ်ပါးကိစ္စကို ကြားဝင်ဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ စိတ်ကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီး တစ်ခုချင်း ဖြေရှင်းသွားပါ . . . " ၇ရက်သားသမီးများအတွက် ဆရာမရွှန်းမြအောင်၏ ဟောကြားချက်များကိုနေ့စဉ် နံနက် ၇ နာရီတွင် စောင့်မျှော်ကြည့်ရှု နိုင်ပါပြီ ။
လက်မှတ်ကို တက်ထူးတဲ့ပရိသတ်ကြောင့် လန့် သွားရတဲ့ နီလန်း
လက်မှတ်ကို ပရိသတ်က တက်တူးထိုးတဲ့အထိဖြစ်သွားလို့ လန့် သွားတယ် - နီလန်း-------- အကုန်သိသတင်းဌာန --------မြန်မာအိုင်ဒေါလ်က အဆိုရှင် နီလန်းရဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦးက နီလန်းရဲ့ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ စာတန်းအတိုင်း ခန္ဓာကိုယ်မှာ တက်တူးထိုးလိုက်တဲ့အတွက် အံ့အားသင့်မှုနဲ့ အတူ လန့် သွားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရိုက်ကူးမေးမြန်း - ကြယ်စင် ၊ ထက်ပိုင်စိုး ၊ တည်းဖြတ် - ရဲထက်#မြန်မာအိုင်ဒေါလ် #နီလန်း
ဒီဇင်ဘာနဲ့ ချင်းတောင်တန်းဟာ လွမ်းမောစရာ ခရီးသွားနေရာလေးပါ--------- ပျော်ပျော်ပါးပါး ခရီးသွား ----------ဒီဇင်ဘာဟာ သာမန်အလွမ်းဓါတ်ခံ မရှိသူတွေတောင် အလွမ်းစိတ်လေးတွေ ဝေဖြာနေတတ်ပါတယ်။ အေးမြမှုတွေ၊ သဘာဝအလှအပတွေ ပေါင်းစပ်လိုက်ရင်တော့ အလွမ်းဓါတ်ဟာ အထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်သွားပါတော့တယ်။ အလွမ်းဓါတ်၊ အဆွေးဓါတ်တွေ အထွဋ်အထိပ်အထိ ခံစားနိုင်စေဖို့ အတွက် ဒီဇင်ဘာမှာ ခရီးသွားသင့်ဆုံးနေရာကတော့ ချင်းတောင်တန်းပါပဲ။ ခရီးသွားတွေ နှစ်သက်မှု မြင့်တက်လာပြီဖြစ်တဲ့ ချင်းတောင်တန်းဆီကို ခရီးသွားကြည့်ကြရအောင်ပါ။ရိုက်ကူးတည်းဖြတ်တင်ဆက် - ဆလိုင်းကျော်မိုး" ပျော်ပျော်ပါးပါး ခရီးသွား " အစီအစဉ်ကို တနင်္လာနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတိုင်း နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်အဖြစ် စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါသည်။
--------- ဗေဒင် ---------" စိတ်မပါတဲ့ အလုပ်တွေလုပ်နေရတတ်ပါတယ်။ စိတ်မပါတဲ့ ခရီးတွေလည်း သွားနေရတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လူပင်ပန်း စိတ်ပင်ပန်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ စိတ်သဘောထား မတိုက်ဆိုင်ဘဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားတွေရဲ့ ပြဿနာတွေကို လိုက်ဖြေရှင်းပေးနေရတတ်ပါတယ် "၇ရက် သားသမီးများအတွက် ဆရာမရွှန်းမြအောင်၏ ဟောကြားချက်များကို နေ့စဉ် နံနက် ၇ နာရီတွင် စောင့်မျှော်ကြည့်ရှု နိုင်ပါပြီ ........ ။
ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းကောင်းများ စုစည်းတင်ဆက်မှု - ည(၈)နာရီ ရုပ်သံ
ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းကောင်းများ စုစည်းတင်ဆက်မှု - ည(၈)နာရီ ရုပ်သံ--------— အကုန်သိသတင်းဌာန —--------(၁) ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးကို အလေးထားနေတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော(၂) ဖုန်းတစ်လုံးတည်းနဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်နိုင်ဖို့ မြန်မာမှာ စတင်(၃) ဘုန်းကံရှိတဲ့ပါတီအတွက် နေရာမရှားဘူးလို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဌေး ပြော(၄) ကာဒစ်နဲ့ ပွဲအတ
အိုးဘိုထောင်ထဲက ဗကသကျောင်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
အိုးဘိုထောင်ထဲက ဗကသကျောင်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်------ အကုန်သိသတင်းဌာန ------ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ရတနာပုံ(ဗကသ) ကျောင်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ မိတ္တီလာခရိုင်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂက မိတ္ထီလာမြို့မှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သွားကြပါတယ်။သတင်း - မောင်ကောင်း(ပြည်)၊ တည်းဖြတ် - သားကို
ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းကောင်းများ စုစည်းတင်ဆက်မှု - ည (၈)နာရီရုပ်သံ
ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းကောင်းများ စုစည်းတင်ဆက်မှု - ည (၈)နာရီရုပ်သံ---------- အကုန်သိ သတင်းဌာန ----------(၁) မိုး/ဇလမှလွဲ၍ ပြင်ပမှလူပုဂ္ဂိုလ်များ မိုးလေဝသသတင်းများထုတ်ပြန်လျှင် အရေးယူမယ့်ဥပဒေကို မမှုဟု ဒေါက်တာထွန်းလွင်ပြော(၂) လူငယ်များကို စစ်တိုက်ခိုင်းနေမယ့်အစား ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် စောစီးစွာပါဝင်လာရန် လုပ်ဆောင်သင့်လို့ ဒေါက်တာ မင်းဇော်ဦးပြော(၃) လူကုန်ကူးခံရတဲ့ မြန်မာ ၇၃ ဦး ကို ထိုင်းရဲတွေ ကယ်ဆယ်ကာ မြန်မာအစိုးရထံ ပြန်လည် လွှဲပြောင်း(၄) NGO အဖွဲ့ တစ်ခုကို ဘင်္ဂါလီလူငယ်အချို့နှောင့်ယှက်တိုက်ခိုက်၊ ၀န်ထမ်း ငါး ဦးဒဏ်ရာရ (၅) တရုတ်တွင် ပြည်သူတစ်ဦးချင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းကို အစိုးရက စောင့်ကြည့် အကဲဖြတ်မယ့် “လူမှုခရက်ဒစ်စနစ်” ဖော်ဆောင်မယ်လို့ အစိုးရ ကြေညာ
သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့က စီစဉ်သည့် The Hidden Reality of Rakhine Situation behind the Media Mask ဆွေးနွေးပွဲအား ရန်ကုန်မြို့ Novotel Hotel Max တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၆) ရက်နေ့က ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် ရခိုင်အရေးကျွမ်းကျင်သူ Mr. Rick Heizman နှင့် သုတေသနပညာရှင် ဦးမောင်မောင်ငြိမ်းတို့က မကြာမီကသွားရောက်ခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်အတွင်း သုတေသနပြုတွေ့ရှိချက်များကို မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပြသခဲ့ပါသည်။ စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင်လည်း Mr. Rick Heizman၊ ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာအေးချမ်းနှင့် သုတေသနပညာရှင် ဦးမောင်မောင်ငြိမ်းနှင့် သုတေသနပညာရှင် ဦးသန်းအေးတို့က ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
စည်ပင်ကော်မတီရွေးချယ်မှုကို ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်တက်ပြီး ဆဲဆိုဝေဖန်တဲ့ ကော်မတီဝင် အဖမ်းခံရ
စည်ပင်ကော်မတီရွေးချယ်မှုကို ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်တက်ပြီး ဆဲဆိုဝေဖန်တဲ့ ကော်မတီဝင် အဖမ်းခံရ------ အကုန်သိသတင်းဌာန ------ဘားအံမြို့ စည်ပင်ကော်မတီအတွက် ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရက ပြန်လည်ရွေးချယ်တာကို ကော်မတီဝင်တစ်ဦးက မကျေနပ်ဘဲ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်တက် ဆဲရေးတိုင်းထွာပြုလုပ် ဝေဖန်ခဲ့တာကြောင့် ပုဒ်မ(၁၀)ဖြင့် ဖမ်းဆီးပြီး ဘားအံအကျဉ်ထောင်သို့ ပို့လိုက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီကော်မတီဝင်က ဝေဖန်ရတာလဲ၊ နောက်ပြီး ဘယ်လိုထိခိုက်မှုတွေရှိလို့ ဖမ်းဆီးအရေးယူရတာလဲဆိုတာ နားဆင်ကြည့်နိုင်ပါပြီ။ရိုက်ကူးမေးမြန်း - စောဘောသိုလ်၊ တည်းဖြတ် - ရဲထက်
ခိုင်-မင်း သွီး s Videos.mp4
၀ါရင့် သရုပ်ဆောင်ကြီး ဘဘ ဦးစံမတူကို မှတ်မိကြသေးလား
၀ါရင့် သရုပ်ဆောင်ကြီး ဘဘ ဦးစံမတူကို မှတ်မိကြသေးလား --------- အကုန်သိ ဆယ်လီ ---------" နောင်လာ နောက်သားတွေကို အဘတို့ ရဲ့ ပညာတွေကို ပေးချင်တယ်။ ယူတဲ့သူက မရှိဘူး။ ပေးချင်တဲ့သူ ရှိပေမယ့် ယူတဲ့သူက မရှိတော့ ဒီပညာတွေက အဘသေရင် အဘနဲ့ ပါသွားပြီပေ့ါ " - ဦးစံမတူ (၀ါရင့် ဟာသသရုပ်ဆောင်ကြီး )အိုသွားလို့ အိုပယ် ဖြစ်သွားရပေမယ့် အနုပညာအလုပ်ကို ခုံမင်နေဆဲပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဝါရင့် သရုပ်ဆောင်ကြီး ဦးစံမတူက ပြောပါတယ်။ အသက် (၈၆)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဘဘ ဦးစံမတူက လာပြီးငှားမယ်ဆိုရင် သိသမျှတတ်သမျှ သရုပ်ဆောင်ပညာတွေကို သင်ပြပေးခဲ့ချင်တယ်လို့ လည်း အကုန်သိနဲ့ တွေ့ ဆုံစဉ်မှာ ထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ရိုက်ကူးမေးမြန်း - နွယ်ဏီ ၊ အိဖြူသိမ့် ၊ တည်းဖြတ် - သားကို
တနင်္လာသားသမီးများအတွက် ဆရာမရွှန်းမြအောင်၏ ဟောကြားချက်
------------ ဗေဒင် ----------" စိတ်ချမ်းသာစရာတွေ ပျော်ရွှင်စရာတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ယူရတာတွေ များနေတတ်ပါတယ်။ စပ်တူလုပ်ငန်းမအောင်နိုင်ပါ။ မထင်မှတ်သော ခရီးကို ရုတ်တရက်သွားရတတ်ပါတယ်။ ငွေရေးကြေးရေး အပေးအယူကိစ္စ သတိထားပေးပါ ......... "၇ ရက်သားသမီးများအတွက် ဆရာမရွှန်းမြအောင်၏ ဟောကြားချက်များကို နေ့စဉ် နံနက် ၇ နာရီမှာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှု နိုင်ပါပြီ ........ ။
Eleven ကိစ္စ ဘာမှလုပ်ပေးလို့ မရသေးဘူးလို့ မီဒီယာကောင်စီ ဆို
Eleven ကိစ္စ ဘာမှလုပ်ပေးလို့ မရသေးဘူးလို့ မီဒီယာကောင်စီ ဆို-------- အကုန်သိ သတင်းဌာန ---------Eleven မီဒီယာသမားသုံးဦးကိစ္စအတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ ထံ ညွှန်ကြားချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီညွှန်ကြားချက်ထဲမှာတော့ သတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့ တိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းပေးမှု သွားဖို့ ၊ ညှိနှိုင်းမှုအဆင်မပြေမှသာ ဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်း သွားဖို့ ဖြစ်ပြီး ဒီမတိုင်ခင်ကတည်းက တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ ကြောင့် မီဒီယာသမားသုံးဦးလုံး အချုပ်နန်းစံ ထားရပါတယ်။ တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ က သမ္မတရုံးညွှန်ကြားစာကြောင့် ကောင်စီကို စာပို့ ထားပြီဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ ကောင်စီဘက်က ဘာမှလုပ်ပေးလို့ မရသေးဘူးလို့ လည်း ထုတ်ပြောလာပါတယ်။ ရိုက်ကူးတည်းဖြတ် - သီဟ
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသူလေး နန်းနှင်းနွယ်အေး အကြောင်း
မိဘတွေပေးတဲ့ ကျောင်းမုန့်ဖိုးကိုစုပြီး Online Shopping တစ်ခု အောင်မြင်စွာတည်ထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသူလေး နန်းနှင်းနွယ်အေး----- အကုန်သိသတင်းဌာန -----အလုပ်ဆိုတာ တစ်ဖက်နိုင်ငံကို သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေမှ အလုပ်လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ဆိုနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ နေပြီးတော့လည်း အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။အခု တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ကိုယ့်ဒေသအတွင်းမှာ နေထိုင်ရင်း တစ်ပိုင်တစ်နိုင်စီးပွားရေးအဖြစ် ရိုးရာအထည်တွေကို လုပ်ကိုင်ရောင်းဝယ်နေတဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသူလေး မနန်းနှင်းနွယ်အေး အကြောင်းပါ။သူမဟာ အခုဆိုရင် ကရင်ရိုးရာအထည်တွေကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရောင်းချင်ရင်း အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ သူ ဘယ်လိုစတင်ခဲ့လဲ၊ အောင်မြင်ဖို့ ဘယ်လိုခံယူချက်တွေ ထားခဲ့လဲဆိုတာကို နားထောင်ကြည့်အောင်ပါ . .ရိုက်ကူး - စောဘောသိုလ်၊ တည်းဖြတ်- ကိုမိုး
ကြာသပတေးသားသမီးတွေ ငွေကံ အရမ်းကောင်းနေမယ်
-------- အကုန်သိ ဗေဒင် --------စပ်တူလုပ်ငန်းလုပ်ရင် အောင်မြင်မယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် စိတ်တွေညစ်ရတတ်တယ်။ လေထိုးလေအောင့်၊ နှလုံးအားနည်းခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူရဲ့ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ခြင်းတွေ ခံရတတ်တယ်။ အိမ်ထောင်ရှင်တွေအတွက်ကတော့ သာသာယာယာပါပဲ အကုန်သိ ဗေဒင်အစီအစဉ်ကို နံနက်(၇)နာရီတိုင်း ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါသည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့အတွက် အကုန်သိ ညနေခင်းသတင်းတင်ဆက်မှု
---------- အကုန်သိသတင်းဌာန -----------(၁) ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦး၏ ပြစ်ဒဏ်အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းအား မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ရဟု အမေရိကန် သံအမတ်ပြော (၂) အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်တွင် သတ်မှတ်အကျဉ်းသားဦးရေထက် ၇၀၀၀ ကျော်များနေ(၃) ပုဂံကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ရန် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ် အောက်တိုဘာလသို့ ရွှေ့ဆိုင်း(၄) တရုတ်နဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲ အမေရိကန်မှာ ဖိအားမရှိဘူးလို့ ဒေါ်နယ်ထရန့် ပြော(၅) SpaceX က လကမ္ဘာ၀န်းကျင်ကို ခရီးသည်ပို့ လွှတ်မည့် အစီအစဉ်သစ်ကို ကြေညာ
Lay Phyu - ပထမနိုင်ငံတော်.mp4
မြစ်ဆုံအပါအ၀င် မြစ်တွေမှာ Dam ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်
မြစ်ဆုံအပါအ၀င် မြစ်တွေမှာ Dam ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် -------— အကုန်သိသတင်းဌာန —-------လာအိုနိုင်ငံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ Dam တွေကနေ ဆိုးကျိုးတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သင်ခန်းစာယူစရာအကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ထပ်မံထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။ ရိုက်ကူး - မင်းသီဟန် ၊ တည်းဖြတ် - ဆလိုင်းကျော်မိုး
နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ၂၄ နာရီ အတွင်းက လှုပ်ရှားမှုများ (၂၄၀)
-----— Cele 24 —-----(၁) ဖြိုးမြတ်အောင်နဲ့ အကယ်ဒမီပိုင်ဖြိုးသုတို့ စတွဲပြီ(၂) စိုးသူ မင်းသားပြန်လုပ်ပြီ(၃) အရက်သောက်ပြီး စူပါ ပါဝါနဲ့ လေပေါ်ပျံတက်သွားတဲ့ ပိုင်တံခွန်(၄) ယုန်လေးနဲ့ ရုပ်ရှင်တွဲရိုက်ချင်တယ်လို့ဆိုလာတဲ့ အကယ်ဒမီထွန်းထွန်းစတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်းက အနုပညာရှင်အချို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်တွေကို အကုန်သိရုပ်သံရဲ့ Cele 24 အစီအစဉ်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ ......... ။
ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ စည်းကမ်းမဲ့ကားတွေများလေ ဦးကျော်ရင်ကို လုပ်ကျွေးသလိုဖြစ်နေဟု ဆို
ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ စည်းကမ်းမဲ့ကားတွေများလေ ဦးကျော်ရင်ကို လုပ်ကျွေးသလိုဖြစ်နေဟု ဆို------ အကုန်သိသတင်းဌာန ------"မြို့ထဲလမ်းမတွေပေါ်မှာ စည်းကမ်းမဲ့ရပ်ထားတဲ့ ယာဉ်တွေကို ဖမ်းပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့ ကရိန်းကားနဲ့ လာဆွဲတာပါပဲ။ တစ်တန်အောက်ယာဉ်ကိုဖမ်းပြီး ကရိန်းနဲ့ဆွဲရင် ဒဏ်ငွေ ငါးသောင်း ရိုက်ပါတယ်။ ယာဉ်ထိန်းက တစ်သောင်း၊ အစိုးရက တစ်သောင်း၊ ဦးကျော်ရင်က သုံးသောင်းရပါတယ်။ တစ်တန်အထက် ဆိုလို့ကတော့ . . ."တည်းဖြတ် - သီဟ
"စာအုပ်စာပေ လူ့မိတ်ဆွေ (၃)"
ပြသနာတွေနဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုမရဘဲ ပြန်လာခဲ့ရတဲ့ ရွှေအိမ်စည် ရင်ဖွင့်ပြီ
ပြသနာတွေနဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုမရဘဲ ပြန်လာခဲ့ရတဲ့ ရွှေအိမ်စည် ရင်ဖွင့်ပြီ-------- အကုန်သိ အနုပညာ ---------ပြိုင်ပွဲအတွက် ၀တ်စုံကိစ္စတွေအဆင်မပြေမှု ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဆုလည်း မရခဲ့ဘဲ ပြန်လာခဲ့ရတဲ့ ရွှေအိမ်စည်က ဆုမရပေမယ့် ကျေနပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လေဆိပ်မှာ လာကြိုသူတွေနဲ့ မီဒီယာတွေကို စကားပြောခဲ့တဲ့ ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ ပြောပုံဆိုပေါက်ဟာ သိပ်ကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။ ရိုက်ကူးတည်းဖြတ် - အိဖြူသိမ့် ၊ ရဲထက်
YBS ကားကို စနစ်တကျ စီးတတ်စေဖို့ ရှေ့ ပြေးစီမံချက် တိုင်းအစိုးရ စတင်
-------— အကုန်သိသတင်းဌာန —-------ဘတ်စ်ကားစီး ခရီးသွားလာရသော ရန်ကုန်မြို့ ပြနေ ပြည်သူများ YBS ကားစီးရမှု စနစ်တကျ ဖြစ်စေရေးအတွက် ရှေ့ ပြေးစီမံချက်အဖြစ် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ က စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရှေ့ ပေါက်က တက် ၊ နောက်ပေါက်က ဆင်း ဆိုတဲ့ စနစ်လေးကိုတောင် မသိကြသေးတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် စတင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရိုက်ကူးမေးမြန်းတည်းဖြတ် - သားကို ၊ စုသက်နှင်း ၊ တင်ဆက် - သီဟ
ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းကောင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှု - ည(၈)နာရီ ရုပ်သံ
ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းကောင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှု - ည(၈)နာရီ ရုပ်သံ--------- အကုန်သိသတင်းဌာန ---------(၁) တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များအား အလွယ်တကူ ဖမ်းမည်ကို လက်မခံသူများ(၂) လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသည် မီးပွားတစ်ခုကျသည်နှင့် ထ တောက်နိုင်ဟု ဆို(၃) တိရိစ္ဆာန်များကို မျိုးပွားခွင့်မပေးတော့သည့် ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန် ဥယျာဉ်(၄) ဆော်ဒီကို လက်နက်ရောင်းမှုပိတ်လျှင် ကိုယ်တိုင်ပြစ်ဒဏ်ခတ်သလို ဖြစ်မည်ဟု ဆို(၄) နီပေါတောင်တစ်ခု၌ နှင်းမုန်တိုင်းကျသဖြင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံသားများ သေဆုံး
ကျွန်ေတာ့်ကို ဗြောင်ကမြင်းခိုင်းတာပေ့ါ - ထူးအယ်လင်း
----— အကုန်သိသတင်းဌာန —-----" ဒီဇာတ်ကားမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြည့်ပြီး အမြင်ကပ်တယ်။ င့ါကိုလည်း အရင်ကတည်း လူတွေက လူဆိုးလို့ မြင်တာဆိုတော့ လူဆိုးလုပ်လည်း မမှားပါဘူးပေ့ါ။ ဟာသအနေနဲ့ တွေးမိတာကို ဒီကောင်က တကယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်တာ။ ဒွေးတို့ ကိုလွင်မိုးတို့ လက်ထက်က ကြည့်လည်း ကြည့်ဖူးတယ်။ ကြိုက်လည်း ကြိုက်ဖူးတယ်။ ဒီဘက်မှာတော့ ဟီးဟီးဟားဟားနဲ့ ပြာယာတွေ ခတ်နေတာပဲ ။ ရုပ်ရှင်လောကမှာ အဲဒါတွေ ကျွန်တော် မကြိုက်ဘူး။ လူဆိုတာ ကုပ်ကမျဉ်းနဲ့ ဗြောင်ကမျဉ်းဆိုပြီး ရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုတော့ ဗြောင်ကမျဉ်းခိုင်းတာ " - Special9ဇာတ်မှ လူဆိုးခေါင်းဆောင် အဆိုတော် ထူးအယ်လင်းရိုက်ကူး - ကြယ်စင်၊ အိဖြူသိမ့် ၊ တည်းဖြတ် - ကိုမိုး#ထူးအယ်လင်း #Special9
ကျေးဇူးရှင်လယ်သမားတွေ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံနေရတာ နိုင်ငံတော်သိလား
ကျေးဇူးရှင်လယ်သမားတွေ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံနေရတာ နိုင်ငံတော်သိလား-------- အကုန်သိသတင်းဌာန -------နိုင်ငံတော်က စပါး ၅ တင်းကို ကျပ် ၅ သိန်းနဲ့သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာ။ ဒါကို လာဝယ်တဲ့သူတွေက ၄ သိန်း ၇ သောင်း/ ၈သောင်းလောက်ပဲပေးတယ်။ ဒီတော့ ၀မ်းစာတောင်မကျန်ချင်ဘူး။ ဖြစ်ချင်တာက နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတိုင်း အတိအကျ လာဝယ်စေချင်တယ်။ အခုဟာက စပါးလည်း မကောင်းတာမဟုတ်ဘဲ ဈေးလျှော့ပြီး ရောင်းရတာကတော့ ကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေ ဒုက္ခရောက်ရတာပေါ့ဆိုပြီး လယ်သမားတစ်ယောက်က အခုလို ငြီးတွား ရင်ဖွင့်လာပါတယ်။ရိုက်ကူး - ကျော်စိုးမိုး၊ တည်းဖြတ် - သားကို
မင်းလှနယ်ထဲမှာ ကျောက်ခေတ်လူသားတွေ နေခဲ့တဲ့ အထောက်အထားတွေ တွေ့ ရှိ
မင်းလှနယ်ထဲမှာ ကျောက်ခေတ်လူသားတွေ နေခဲ့တဲ့ အထောက်အထားတွေ တွေ့ ရှိ--------- အကုန်သိ သတင်းဌာန ----------မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်းလှမြို့ နယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ တောတန်းတွေထဲမှာ ကျောက်ခေတ်လူသားတွေ နေထိုင်ခဲ့ပုံရတဲ့ ကျောက်ခေတ်လက်နက်တွေကို မြေအောက်ကနေ တူးဖော်တွေ့ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျောက်ခေတ် လက်နက်တွေဟာ အမှောင်ခေတ်ကလား ၊ ကျောက်ချောခေတ်ကလားဆိုတာကို တတ်သိနားလည်သူတွေက လေ့လာနေကြပါတယ်။ မင်းလှနယ်ဟာ ကျောက်ခေတ်လူသားတွေ နေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနိုင်တဲ့ နောက်ထပ်အထောက်အထားတွေ ဆက်လက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ ရိုက်ကူး - သက်နောင်(မင်းလှ) ၊ တင်ဆက် - အိဖြူသိမ့် ၊ တည်းဖြတ် - ရဲထက်
ထားစရာနေရာ မရှိလို့ ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ထဲက တိရိစ္ဆာန်တွေ မျိုးပွားခွင့်မရှိတော့
ထားစရာနေရာ မရှိလို့ ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ထဲက တိရိစ္ဆာန်တွေ မျိုးပွားခွင့်မရှိတော့-------- အကုန်သိ သတင်းဌာန ---------သက်တမ်းရာချီနေပြီဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှာ ထားစရာနေရာတွေ မရှိတော့လို့ တိရိစ္ဆာန်အချင်းချင်း မိတ်လိုက်ပြီး ထပ်မံမွေးဖွားမှုတွေ မဖြစ်စေဖို့ အထီးနဲ့ အမကို ခွဲခြားပြီး သီးသန့် ထားနေရတယ်လို့ တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာ မြင့်သိန်းက ပြောပါတယ်။ ရိုက်ကူးမေးမြန်း - မင်းသီဟန် ၊ တည်းဖြတ် - သားကို ၊ တင်ဆက် - အိဖြူသိမ့်
လူမှုကွန်ရက်တွင်ပျံ့ နှံ့ ခဲ့သော ခရစ်ယာန်သာသနာပြုရုပ်သံအတွက် အမှုဖွင့်မယ်
လူမှုကွန်ရက်တွင်ပျံ့ နှံ့ ခဲ့သော ခရစ်ယာန်သာသနာပြုရုပ်သံအတွက် အမှုဖွင့်မယ်---------- အကုန်သိ သတင်းဌာန ----------လူမှုကွန်ရက်တစ်ခွင်မှာ ပျံ့ နှံ့ ခဲ့ပြီး လူပြောသူပြောလည်းများခဲ့သလို ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကလေးငယ်များနှင့်သီလရှင်များ၊ ဆရာမများကို ခရစ်ယာန်စတိုင် ရှိခိုးခိုင်းမှုအတွက် ဆရာတော် ဦးပါမောက္ခက ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်က ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ က ရဲအရေးမပိုင်တဲ့အတွက် ထောက်ခံစာပုံစံမျိုး ရေးသွင်းပြီး တရားလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက်တိုင်ကြားနိုင်စေဖို့ သာ ကူညီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ လည်း သိရပါတယ်။ တည်းဖြတ် - သူရိန် ၊ တင်ဆက် - အိဖြူသိမ့် ၊ ရိုက်ကူး - ဝိဘဇ္ဇသွေး
လက်ရည်တပြင်တည်း အကနဲ့တီးလုံး အရမ်းမိုက်တယ်(240P)_384x216.mp4
၂၄ နာရီအတွင်း အနုပညာရှင်တွေ ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ (၂၅၇)
(၁) စက်သုံးဆီဈေးတက်တာကြောင့် အောင်သော်ရဲ့ လူမှုကူညီရေးအသင်း ရပ်လိုက်ရ(၂) ပုဂံမှာ အမှိုက်တွေမပြစ်ဖို့ ကမ်းပိန်းလုပ်ခဲ့တဲ့ လူမင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံ(၃) ကွဲကွာနေတဲ့ ဇင်ရော်မောင်မောင်တို့ မိသားစုတွေ စုံစုံလင်လင်နဲ့ ပြန်တွေ့ ရ(၄) ကတိအတိုင်း ကြက်ဥကို မျက်နှာပေါ်မှာ ခွဲပြလိုက်ရတဲ့ အိစိကွေးCele 24 အစီအစဉ်ကို ညစဉ်(၇)နာရီတိုင်း ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါသည်။
ဘိုကလေးမြို့ နယ်မှာ အချုပ်သားအချို့ အချုပ်ခန်း ဖောက်ပြေး
ဘိုကလေးမြို့ နယ်မှာ အချုပ်သားအချို့ အချုပ်ခန်း ဖောက်ပြေး-------- အကုန်သိသတင်းဌာန ---------ဘိုကလေးမြို့ မရဲစခန်းမှာ လုယက်မှုနဲ့ အချုပ်ခံထားရတဲ့ အချုပ်သား သုံးဦးဟာ အချုပ်ခန်းဖောက်ပြေးမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို နားဆင်နိုင်ပါပြီ။တည်းဖြတ် - သူရိန် ၊ သတင်း - ဒါးဇ ၊ တင်ဆက် - အိဖြူသိမ့်
ဇရပ်အို တဲပျက်လေးထဲမှာ အချစ်တိုက်ပွဲအတူဆင်နွဲနေကြတ(MP4_High_Quality).mp4
သဟာယ စကားဝိုင်း (၁)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ e-Government စနစ်သည့် အာစီယံ ၁၀ နိုင်ငံအတွင်း အဆင့် ၉ တွင်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ e-Government စနစ်သည့် အာစီယံ ၁၀ နိုင်ငံအတွင်း အဆင့် ၉ တွင်ရှိဟု မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းစုငြိမ်းက ပြောပါတယ် ..... ။ရိုက်ကူး/တည်းဖြတ် - ထက်ပိုင်စိုး၊သားကို
ဆင်းရဲပြီး ပြစရာမရှိသောတိုင်းပြည်လို့ ဦးဇော်ဇော် ပြော
ဆင်းရဲလှသော တိုင်းပြည်တွင် ပြစရာမရှိဘဲ မြန်မာအားကစားတွင် ဘောလုံးအားကစား အောင်မြင်ရေးအတွက် တိုင်းပြည်ဆင်းရဲနေသည့်တိုင် ဖြစ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားကြရန် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်က အသင်းသားတွေကို မှာကြားလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းဟာ မကြာခင်မှာ ဆူဇူကီးဖလား ကန်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ အမှာစကားနဲ့ အတူ အသင်း ဘယ်လောက်အောင်မြင်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြပါစို့ ။
"ကိုယုန်လေး လက်တစ်လုံးကြား လုပ်သွားတယ်" လို့ ထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တဲ့ ထက်ယံ
-------- အကုန်သိသတင်းဌာန ---------"အဆိုတော်ကားဆိုတော့ လှတပတပေါ့။ အိုကေ စရိုက်လိုက်တဲ့နေ့ကစပြီး နောက်ဆုံးပြီးတဲ့နေ့အထိပဲ တစ်ရက်မှ ကျွန်တော် လှတပတ မ၀တ်လိုက်ရဘူး။ အင်္ကျီတစ်စုံတည်းနဲ့ ပတ်ပြေးနေရတာပေါ့ . . ကိုယုန်လေး လက်တစ်လုံးကြားလေး ကျွန်တော်တို့ကို လုပ်သွားတယ် ။ တစ်ခန်းပဲ သားသားနားနားပါလိုက်တယ်။ ရှိုးဆိုတဲ့အခန်း" ဆိုပြီး အဆိုတော် ထက်ယံက Special9ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ဖြစ်တဲ့ အတွေ့အကြုံကို အခုလို ပြန်လည်ပြောပြပါတယ်။ရိုက်ကူး - နွယ်ဏီ၊ တည်းဖြတ် - ရဲထက်
"တစ်ရက် ၁၀၀၀ ပေးပြီး အချိန်ပိုင်းနည်းပြခန့်မယ်ကိစ္စကို ရှက်တယ်" - ကထိက ဦးလှိုင်တင့်
"တစ်ရက် ၁၀၀၀ ပေးပြီး အချိန်ပိုင်းနည်းပြခန့်မယ်ကိစ္စကို ရှက်တယ်" လို့ ကထိက ဦးလှိုင်တင့်ပြော----- အကုန်သိ ပညာရေး -----ဖြစ်သင့်လား မဖြစ်သင့်လားဆိုတာ စဉ်းစားဖို့ လိုအပ်တယ်။ နိုင်ငံတော်အဆင့်မှာ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ တစ်နေ့လုပ်အားခ ၄၈၀၀ ကျပ် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပြီးသား။ တစ်နေ့ ၁၀၀၀ နှုန်းနဲ့ လူကြားလို့မကောင်းတဲ့ အချိန်ပိုင်းနည်းပြခန့်မယ်ဆိုတဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်တာဟာ အင်မတန်မှ ရှက်စရာကောင်းပါတယ်။ရိုက်ကူးမေးမြန်း - ချမ်းငြိမ်း၊ တည်းဖြတ် - ကိုမိုး
``မြန်မာနိူင်ငံက အမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများ ကအပေါ်ပိုင်းရင်သားပိုင်းကိုလှချင်ကြချင်တယ်။အဲဒီ့အတွက်အဲဒီ့ဆေးကို ထိုင်းနိူင်ငံကကိုယ်စားလှယ်ယူပြီးတော့ ရောင်းနေတယ်။ ဆေးကအကျိုးသက်ရောက်မှုကရှိတယ်။SideEffectက လုံးဝမရှိပါဘူး။ ညီမကိုယ်တိုင်လည်းသောက်နေတာပါ``သရုပ်ဆောင်ခြူးစစ်ဟန်နဲ့ အင်တာဗျုး-မေးမြန်းသူ- ချယ်ရီ
၂၄ နာရီအတွင်း အနုပညာရှင်တွေ ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ (၂၅၈)
၂၄ နာရီအတွင်း အနုပညာရှင်တွေ ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ (၂၅၈) -------— အကုန်သိသတင်းဌာန —-------(၁) ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် Miss Universe Sagaing အလှမယ် မိုးဆက်ပိုင် သေဆုံး(၂) အရေးပြားရောဂါခံစားနေရတဲ့ ဆရာတော်ဦးကောဝိဒအား သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်တိုင်ရွန်(၃) မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာတဲ့ ခေး(၄) စာပို့သင်္ကေတ Ambassador အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ မိုရီဆာကီဝင်းCele 24 အစီအစဉ်ကု
တစ်နှစ်အတွင်း ကရင်ပြည်နယ်၌ မူးယစ်မှု ၅၂၀မှု၊ တရားခံ ၇၇၉ ဦးနှင့် ဆေးပြား ၂၃ သိန်း ဖမ်းဆီးရမိ
ရိုက်ကူး/တည်းဖြတ် - စောဘောသို၊ သူရိန်
batman arkham knight пасхалки
best pakistani music 2018